Funda amalungelo kwiiSpredishithi zikaGoogle > UVielhuber uDavid
Funda amalungelo kwiiSpredishithi zikaGoogle04
Xa usebenza ne- Google AmaSpredishithi , kulungile, imigaqo esekwe kubasebenzisi yokuhlela iiwekhishithi, iikholamu kunye nemiqolo inokuchazwa ngaphakathi kwespredishithi. Ngelishwa, akukho ndlela yokuthintela amalungelo okufunda. Nangona kunjalo, oku kunokuba luncedo kakhulu kwiimeko ezininzi. Ke ubonisa abathengi bakho kuphela ezo tikiti zibachaphazelayo okanye abasebenzi kuphela iiprojekthi abasebenza kuzo.
Isisombululo esinokubakho kukwenza into ebizwa ngokuba yi- mastersheet kwaye, ngoncedo lwe- IMPORTRANGE, ukufunda idatha ekhethiweyo ukusuka apho kwicala elinye. Ngelishwa, oko kuthetha umsebenzi omninzi wesandla: ukudala amashiti amatsha, ukwabela amalungelo efayile, ukuphuhlisa kunye nokuphumeza ifomula yokungenisa, ukwamkela imvume, ukubeka ifomathi. Ukuba ulwakhiwo okanye ifomathi iyatshintsha, oku kufuneka kwenziwe ngesandla kuzo zonke i-spreadsheet ngokwahlukeneyo.
Isicatshulwa esilandelayo seGoogle Apps senza oku ngokuzenzekelayo. Ukuba uyenza init () indlela yakanye kwi-mastersheet, onke amakhoboka ayenziwa ngokuzenzekelayo, amalungelo abelwe kunye neefomula kunye nefomathi emiselweyo. Ukuba utshintsho lwedatha kwiphepha eliyintloko, liboniswa ngokuzenzekelayo kwiphepha lezigqila. Ukuba ulwakhiwo lwe-master sheet luyatshintsha, yenza init () kwakhona (amaphepha adlulileyo ahlaziywa ngokuzenzekelayo).